भाषामा भाँडभैलो : 'अधिकार नभएकाहरूले अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरे' - लोकसंवाद
लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्ने गर्छ । हामी प्रश्नको उत्तर होइन, यसको समाधानका लागि लोकसंवाद सञ्चालन गर्छाैं । लोकसंवादमार्फत् हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्कोेे गर्छौं ।
पछिल्लो समय नेपाली भाषा, विशेषगरी वर्णविन्यासमा भाँडभैलो मच्चिइरहेको र त्यसबारे निकै बहस र विवाद भइरहेको छ । नेपाली भाषाको पछिल्लो विकृत रूपलाई लिएर भाषाशास्त्री, भाषाविद् तथा भाषा साहित्यका क्षेत्रका व्यक्तिहरू निकै चिन्तित छन् ।
यस पटककाे लोकसंवादमा हामीले 'नेपाली भाषाको भाँडभैलो र समाधान'का बारेमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्न नेपाली भाषाका जानकार भाषाशास्त्री डा. बलदेव अधिकारी (गाउँले बलदेव), भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्ती र काराेबार दैनिकका सम्पादक कुवेर चालिसेसँग लोकसंवाद गरेका छौँ । सहभागी हुनुहुन्छ ।
यो अहिले देखिएको भाषाको भाँडभैलो के हो ?
भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएका मान्छेहरूले अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरेर, त्यो कामका लागि राज्यको स्रोत, साधन र शक्ति प्रयोग गरेर जबर्जस्ती लाद्न खोजिएपछि आएको भाँडभैलो हो यो ।
भाषाको मानक बनाइदिने राज्यले हो ?
डा. बलदेव अधिकारी
मानक जोगाइदिनेचाहिँ राज्यले नै हो । बनाउनेचाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको संस्थाले हो । त्यो संस्था जहाँ पनि हुन्छ । हाम्रोचाहिँ नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति थियो । त्यो नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिले पहिलो आधिकारिक शब्दकाश बनाएको थियो । प्रामाणित शब्दकोश, वैज्ञानिक शब्दकोश थियो त्यो । बालकृष्ण पोखरेलले पनि असाध्यै प्रशंसा गर्नुभयो । त्यसभन्दा पछाडिका शब्दकोशहरूमा शब्दको संख्या थप्न सकिन्छ । जति पनि थप्न सकिन्छ । तर, त्यो पहिलो शब्दकोशले जुन अवधारणा बनायो, त्यसैको अन्तर्गत रहेर सबै शब्दका वर्णविन्यास मिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यो भताभुङ्ग बनाइयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरूले नै यस्तो गलत काम गरेका हुन्, उनीहरू नै विभिन्न संस्थाहरूमा गएर ।
यो मानक भाषा भनेको के हो ?
मानक भाषा भनेको परंपरागत रूपमा जुन चलेर आएको भाषा हो, त्यो भाषालाई समस्त साहित्यकार, लेखक, विद्वानहरूले जुन स्थलमा लगेर राख्छन र त्यो ग्राह्य पनि हुन्छ । राम्रा शब्दकोशहरूमा ‘यो शब्द फलानो कविले, फलानो साहित्यकारले, फलानो ठाउँमा प्रयोग गरेको’ भनेर पनि राखिन्छ । किनभने, शब्दकोशले एउटा अर्थ दिन्छ, त्योभन्दा अझ गहिरो अर्थमा पनि उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । मानकता त्यहीँ भेटिन्छ । र, त्यहाँबाट नै मानकता खोजिने हो ।
नेपाली भाषाका प्राध्यापकहरूले नै नेपाली भाषाको मानक भत्काए भन्ने कुरो आयो । अझ मिडियामा मिडियाकर्मीहरू अथवा पत्रकारहरूले झन् बढी भाषा बिगारिरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ, के साँचो हो ?
मिडियालाई हामीले अझ बढी ‘प्राक्टिकल सेन्स’ (व्यावहारिक हिसाब)मा हेर्नुपर्छ । साहित्य एउटा पक्ष हो । हुनत मिडियालाई पनि हतारको साहित्य भनिन्छ । तर, मिडियामा आउँदा हामी अझ बढी ‘प्राक्टिकल’ (व्यावहारिक) भाषा हेर्छौं । भाषा जनजिब्रोमा भएको, मान्छेले बुझ्ने प्रयोग गर्नुपर्छ । किनभने भाषा अरूलाई सूचना दिने एउटा माध्यम हो । यसो भएको हुनाले मिडियामा एकदमै सरल, एकदमै गतिशील, जसरी मान्छेले बुझ्छ, त्यसलाई त्यसैगरी बुझाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा आउँदाखेरि मिडियामा चाहिँ भाषा एकदमै सरल, सुबोध्य र गतिशील हुनुपर्छ भन्छु म ।
मिडियाको गतिशील भाषा भनेको के हो ? तपाईं आफैँ पनि भाषाविद् हुनुहुन्छ । कुवेर चालिसेले भन्न खोज्नुभएको के हो खास ?
मिडियाको पहिलो काम संचार हो । त्यसपछि आमसंचारमा जाने हो । र, आमसंचार भनेको एकदमै सर्वसाधारण, अतिसामान्य मान्छेमा पनि सूचना सहज ढंगले प्रवाहित हुनुपर्‍यो । तपाईंले दिएर भएन, लेखेर, बोलेर प्रसारण गरेर हुँदैन । पाठक, श्रोताले ग्रहण गरेर बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । आममान्छेले, सर्वसाधारणले बुझ्ने हुनुपर्छ र सामान्य पढेकाले पनि बुझ्नुपर्‍यो ।
साहित्यकारले त्यस्तो लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, लेख्न पनि सक्छ, नलेख्न पनि सक्छ । तर, संचारकर्मीले भने सरल, सहज र सुबोध्य लेख्नै पर्छ । किनभने उसको काम संचार गर्ने हो । आममान्छेलाई संचार गर्ने हो । सूचना वा सन्देश प्रभावकारी ढंगले संचारित कसरी हुन्छ भन्दा उसले बुझ्ने किसिमले लेखिदियो भने प्रभावकारी संचार हुन्छ । उसले सामान्य बोलचालको भाषामा लेखिदियो भने मात्रै राम्ररी बुझ्छ । संचारमा भाषाकै कारण अप्ठ्यारो पर्‍यो भने सन्देश राम्ररी बुझ्दैन । त्यस कारणले संचार भन्ने कुरा के हो भनेर हामीले बुझ्नेवित्तिकै किन त्यस्तो भाषा मिडियामा आवश्यक हुन्छ भन्ने आफैँ स्पष्ट भइहाल्छ ।
त्यसको उद्देश्य नै त्यही हो । संचार सहज र प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेन भने त आमसंचार असफल भयो नि त ! लेखिदिएर मात्रै, बोलिदिएर मात्रै त भएन । प्रभावकारी संचार भएन भने त मिडियाको आधारभूत कर्तव्य नै उसले पूरा गर्न सकेन ।
डा. बलदेव अधिकारी आफैँमा भाषाशास्त्री हुनुहुन्छ । साहित्यमा प्रयोग गरिने भाषा अनि सामान्य बोलिचालीमा प्रयोग गरिने भाषा र मिडियाको भाषा फरक हुन जरुरी छ र ?
भाषाको अभिव्यक्तिको शैली तीन किसिमको हुन्छ । एउटा अभिधात्मक हुन्छ, अर्को लक्षणात्मक र अर्को व्यञ्जनात्मक हुन्छ । लक्षणा र व्यञ्जना बोलिचालीमा नै आउँछ । उखान, टुक्काहरू लक्षणा र व्यञ्जनामा आउँछन् । बच्चाहरूले त लक्षणा र व्यञ्जना बुझ्दैनन् । खास कुरा यो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तो हो । बोलिचालीमा साहित्य आउँदैन । कथ्य साहित्य, लोकसाहित्य कति राम्राराम्रा छन्, स्तरीय छन् । कुवेरजीले खास भन्न चाहनुभएको कुराचाहिँ मिडियामा अभिधात्मक भाषा–शैलीको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हो । बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याइएको शब्द बढी प्रयोगमा आए बुझ्न सजिलो हुन्छ । सर्वसाधारणले सुनेको, पचाउन सक्ने शब्दहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो ।
अब मानकको कुरा गर्ने हो भने, मानक भनेको संसारकै पहिलो शब्दकोशले जुन कुरा स्थापित गर्‍यो, वर्णविन्यासको मानक त्यही हो र त्यो अपरिवर्तनीय हुन्छ । अंग्रेजीको शब्दकोश कुप्रा बाजेले किनेर त्यो पनातिसम्मले पढ्न मिल्छ । त्यो एउटै हुन्छ । संस्कृतको शब्दकोश अमरकोश भनौँ, त्यहाँ निरन्टु, निरुत्तम छन् । निरन्टु भनेको वैदिक शब्दकोश भयो । वेदमा व्याकरण बनिनुभन्दा अगाडिको शब्द भएको हुनाले त्यहाँ व्याकरणमा पनि अचम्म छ, वेदमा ।
त्यसका लागि निरन्टु, निरुत्तममा जम्मा गरियो, वैदिक शब्दहरूलाई जस्ताको त्यस्तै नबिगारीकन । त्यस्तैगरी हाम्रो पनि शब्दकोश बन्नुभन्दा अगाडिका शब्दहरू, जो भानुभक्त आचार्यहरूले प्रयोग गरे । बिगार्न त पाइँदै पाइँदैन । भानुभक्त आचार्यहरूले प्रयोग गरेका निरन्टु, निरुत्तममा संकलन गरेजस्तै जस्ताको त्यस्तै जम्मै त्यहीँ राखिदिनुपर्छ । त्यसपछि मानक जो हुने भयो– बगलीकोश, चक्रपाणी चालिसेको ।
मानक शब्दकोश एक पटक बनिसकेपछि त्यसले स्थापना गरेको वर्णविन्यासको जो विधि हो, त्यो भत्काउन पाइँदैन ।
भाषा परिवर्तनशील छ । सबै आवश्यक शब्दहरू हामीसँग हुँदैनन् । अन्य भाषाका शब्दहरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो मानक भाषामा केही असर पर्दैन ?
पर्दैन, किनभने हामीले प्रयोग गरेका शब्दहरू परंपरागत रूपमा स्थापित भएका, मान्य भइसकेका, लोक व्यवहारमा पुगिसकेका, विशिष्टजनहरूले प्रयोग गरेर स्थापित भइसकेको कुरालाई चलाउन भएन । त्यसलाई चलाउने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । त्यसलाई चलाउन खोज्नु अनधिकृत चेष्टा हो । त्यो स्थापित भइसकेको कुरा हो । त्यसमा एउटा विद्वान्लाई पनि, एउटा संस्थालाई पनि र संस्था मात्रै होइन, सर्वशक्तिमान संसदले एकै ठाउँमा भेला भएर निर्णय गर्छु भनेर पनि पाइँदैन । अहिले केही व्यक्ति र निकायले त्यो गर्न नपाइने कुरा गरेको कारणले भाषामा भाँडभैलो भएको हो ।
अनि अरू भाषाबाट आउँदाखेरिमा मानक भत्किने, भाषा बिग्रिने भन्ने खालको कुरा हुँदैन । तपाईंले आफ्नो भाषालाई ठीकसँग सम्हाल्न सक्नुपर्‍यो । भाषाको प्रकृतिलाई बिगार्नुभएन । र, भाषाको पाचन शक्ति पनि बलियो बनाउनुपर्‍यो । त्यसपछि जति शब्द आवश्यक हुन्छन् र आउँछन्, त्यसरी आएर नै भाषा समृद्ध हुने हो ।
अंग्रेजीमा अहिले करिब आठ लाखजति शब्द छन् भनेर भनिन्छ, प्राविधिक र अप्राविधिक गरेर । त्यसमध्येमा एउटा असाध्यै ठूलो ‘स्कलर’ले पनि जिन्दगीमा ६० हजारभन्दा बढी शब्दहरू प्रयोग गर्दैन रे ! तर, अंग्रेजीको सुरुमा कति शब्दको थियो त शब्दकोश ? अंग्रेजी त बेलायतको पनि राष्ट्र भाषा होइन । अनि त्यस्तो बेलामा २६-२७ हजारजति शब्द थिए भन्ने सुनेको छु मैले । त्यसमा ८ लाख पुग्दाखेरि त बाहिरबाट आएका शब्दले छोपेर, पुरिएर उहिले नै निस्सासिएर मर्नुपर्ने तर त्यस्तो भएको छैन । उसले आफ्नो पाचन शक्ति बलियो बनायो । त्यसले उसका शब्दहरू बिगारेन अनि त्यो स्थापित भयो । संसारमै उदाहरण भयो ।
अब हामीले जान्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने पाटोचाहिँ त्यो हो । हामीचाहिँ के भने अनधिकृत किसिमको, आफ्नो अधिकारै नभएको कुरा गरेर, हिज्जेमा किचलो गरेर, शब्दहरू भत्काएर यसैका पछाडि लागेको लाग्यै छौँ ।
२०४० सालको एउटा शब्दकोश बन्यो, अहिलेचाहिँ २०७६ सालको, ३६ वर्ष भयो नेपाली शब्दकोश बनेको । अहिलेसम्म एउटा शब्द थपिएको छैन त्यसमा । बरु बीचका शब्दकोशका पानाहरू घटे । ज्ञान–विज्ञानको यस्तो प्रचण्ड विस्फोट भइरहेको बेलामा नेपाली भाषामा कति शब्द आएका होलान्, कति शब्द थपिएका होलान्, व्यवहार कहाँ पुगेको होला ? एकेडेमीको शब्दकोशले त्यो देख्दैन । किन देख्दैन भन्दाखेरि त्यो किचलोमा अल्झेको छ, अल्झेको छ । फेरि किचलो पनि कस्तो भन्दा जम्माजम्मी नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्दको हिसाब गर्ने हो भने, गन्ती नै गर्ने हो भने त दुई–तीन प्रतिशत मात्रै र एकदमै फैलाउने अनौपचारिक भाषामा जाने हो भने पाँच प्रतिशतजति औपचारिकमा दुई–तिन प्रतिशतजति मात्रै शब्दमाथि आक्रमण गरेका छन्, बिगारेका छन् ।
तर, त्यति भए पनि त्यसले यति ठूलो समस्या खडा गर्‍यो, यति ठूलो अराजकता खडा गरेको छ कि त्यसले गर्दा भाषाका बारेमा छलफल, चिन्तन गर्ने चिज नै यो ३५–३६ वर्षयता आउँदै आएन । त्यही हिजोको किचलोमै अडियो । त्यसले भाषाको गति अवरुद्ध गरायो । भाषालाई पछाडी पुर्‍याइरहेको छ । यो गर्न नहुने किचलो गरेको छ ।
यो किचलो खडा नगरिदिएको भए नेपाली भाषा निकै अगाडि बढिसक्थ्यो । हाम्रो शब्दकोश पनि निकै ठूलो भइसक्थ्यो ।
अर्को, अहिले संचारले भाषा बिगार्‍यो भन्ने किसिमका कुराहरू छन्, म त भन्छु– जति नेपाली भाषा राम्रो भएको छ नि, त्यो संचारकै कारणले भएको छ । कहीँकहीँ चिप्लिएको पनि छ तर नेपाली भाषा राम्रो, एकदमै सम्प्रेषणीय भएको छ, त्यो संचार माध्यमले गर्दा नै हो । आजभन्दा ३० वर्ष पहिलेको भाषा, जतिखेर संचार माध्यमहरू पनि धेरै थिएनन्, त्यतिखेरको भाषा र अहिलेको भाषा हेर्नुहोस्, कस्तो किसिमको नेपाली भाषा अघि बढिरहेको छ ? संचारको भाषासँगै साहित्यको भाषा पनि फरक पर्दै आएको छ ।
योचाहिँ नेपाली पढाउने गुरुहरूका कारणले होइन, गुरुहरूका बाबजुत यस्तो भएको हो । जसले आफूले भाषाको नियामक हुँ भन्छन् नि, इमान्दार शिक्षकले त सिकाए राम्रोसँगै तर भषामा नियन्त्रण गर्छु भनेर जुन ठूलाठूला ठाउँमा बसेर, एकेडेमी, विश्वविद्यालयमा बसेर नचाहिने काम गरे, उनीहरूका बाबजुत नेपाली भाषालाई पत्रकारिताले यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको हो ।
कुवेर चालिसे अंग्रेजी भाषाको राम्रो जानकार हुनुहुन्छ । हिन्दी, अंग्रेजीमा प्रयोग भइरहेका शब्दहरू र नेपालीमा प्रयोग भइरहेका र अहिले पछिल्लो समय भाषामा भइरहेको विवादसमेत जोडेर भनिदिनुहोस् न नेपालीमा यो आवश्यक थियो कि थिएन, विशेष मिडियाको तर्फबाट भन्नुपर्दा ?
अहिले भाषा जति पनि गतिशील भएको छ अथवा जति समृद्ध हुँदै गएको छ, मिडियाले गर्दा नै हो । गल्ती भएको छ, गल्ती नभएको होइन । मिडियाले भाषा बिगारे, यो गरे, त्यो गरे भन्छन् । यी अनेक आरोप लाग्नुका बाबजुत पनि जति पनि नेपाली भाषामा गतिशीलता आएको छ, शब्दहरू धेरै नयाँ आएका छन्, यो सबै मिडियाका कारणले हो ।
त्यसका बाबजुत पनि हामीले हेर्ने, सिक्ने भनेको अगाडि अरू भाषाका हेरेर पनि हो । अंग्रेजी जसरी समृद्ध हुँदै गयो, त्यसका पछाडि उसले अन्य भाषाका शब्दहरूलाई स्वीकार गर्दै गयो । हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकेनौँ । नेपाली भाषामा पनि त्यसैगरी शब्दहरू त स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो नि ! जनजिब्रोमा, व्यवहारमा, मिडियामा त आइरहेको छ तर त्यसलाई शब्दकोशले ‘एडप्ट’ गरेर भाषा समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्‍यो । फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्‍यो ।
मिडियाकै मात्र कुरा गर्ने हो भने, हामीले ‘प्राक्टिस’ गरेको मिडियामा अंग्रेजीमा पनि, नेपालीमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । हामीले अंग्रेजी मिडिया, बाहिरका मिडिया हेरेरै सिकेको हो यहाँ पनि । भाषाचाहिँ गतिशील हुन्छ । मिडियामा एकदमै गतिशील भएन भाषा भने त्यो मिडियाको अर्थ हुँदैन । आमसंचारले आमजनताका लागि सन्देश दिने भएको भएर हामीले भाषाको त्यो गतिशीलतालाई रोकेर त्यहीँ बसिरहनुपर्छ, गतिशील हुनुहुन्न भन्ने कुरा मान्दैनौँ ।
अझ आर्थिक पत्रकारिता फस्टाउँदै गयो, स्वास्थ्य–विज्ञान पत्रकारिता फस्टाउँदै गयो, अरूअरू विधागत पत्रकारिता फस्टाउँदै जाँदाखेरि ती शब्दहरू, जुन नेपालीमा थिएनन्, ती शब्दहरू मिडियाले ल्यायो । शब्द जुन जसरी प्रयोग भएको छ, मान्छेले जसरी त्यसलाई स्वीकार गर्छ, मिडियाले त्यसैलाई ‘प्रोमोट’ गरेर गएको हुनाले हो । मिडियाले भाषालाई एक किसिमले समृद्ध बनाउने काम गरेको छ । सिक्दै पनि गइरहेको छ, अंग्रेजीबाट, हिन्दीबाट । कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने, मान्छेले बुझ्ने भाषा कसरी बनाउने भन्ने ‘प्राक्टिस’ गर्दै अघि बढेको छ ।
कसैले नसिकाए पनि आफैँ सिक्दै, लड्दै, पड्दै, जेजे मान्छेले बुझ्छन्, जसरी बुझ्छन्, त्यसैगरी बुझाउने हाम्रो बाध्यता पनि भयो । यसरी भाषाको विकास हुँदै जाने हो । त्यसमा पनि मिडियाले धेरै राम्रो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपाली पत्रकारितामा नेपाली भाषामा त पहिला रेमिट्यान्स भन्ने शब्द आयो । त्यसको अर्थ मान्छेले बुझिसकेपछि विप्रेषण भन्ने शब्द आएको हो । रेमिट्यान्स भन्ने शब्द हिमाल खबर पत्रिकाले नै स्थापित गरेको हो । त्यसपछि त्यसलाई नेपाली चाहिन्छ भनेर विप्रेषण बनाइयो तर मान्छेले चाहिँ रेमिट्यान्स नै बुझ्छन् । अरू भाषाबाट शब्दहरू आए भने हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने हाम्रो दिमागमा आइरहेको छ, त्यो होइन । जति धेरै शब्द आए, त्यति शब्दहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्नुपर्छ । जनजिब्रोमा नपचीकन लेख्न थाल्यो भनेचाहिँ गाह्रो हुन्छ ।
भाषा गतिशील हुन्छ तर त्यो भनेको कसैले जबर्जस्ती घिच्याएर गतिशील बनाइदिने होइन, त्यो आफैँ गतिशील हुन्छ । नेपाली भाषाको गतिशीलताचाहिँ ३०–३५ वर्षयता हेर्ने हो भने म सबैभन्दा राम्रो रूपमा चाहिँ संचार माध्यममार्फत् भएको देख्छु । भाषाका बारेमा कुरा गर्ने र म भाषाको ठेकेदार हुँ भन्ने मान्छेहरूको उनीहरूकै भाषा हेर्ने हो भने, त्योचाहिँ भाषा कति गतिशील छ र कति के छ भन्ने उदाहरण त्यहीँ अगाडि छर्लङ्ग छ । त्यस कारण संचार माध्यमले नेपाली भाषामा राम्रै काम गरेको छ जस्तो लाग्छ । विदेशी शब्दहरू आउँदैमा हामीले आत्तिनुपर्दैन । नेपाली भाषाको प्रकृतिचाहिँ बिग्रिनुभएन तर विदेशी शब्द नै आएर हाम्रो भाषा बिग्रिने होइन ।
डा. बलदेव गाउँले आफैँ नेपाली भाषाका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ अनि भाषाशास्त्री पनि । के नेपाली भाषाको समृद्धिमा संचार माध्यमकै मात्र विशेष भूमिका हो कि यहाँहरू प्राध्यापन गरिरहेकाहरूको अथवा नेपाली भाषाका विद्वान्‌हरूको, भाषाका अभियान्ताहरूको पनि केही हिस्सा छ यसमा ? के उहाँहरूले भनेजस्तै नेपाली संचार माध्यमहरूले मात्रै नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाइरहेका हुन् ?
उहाँहरूको भनाइचाहिँ सत्य हो । विद्यालयले अक्षर त चिनाइ दिनुपर्‍यो । विद्यालयहरूको भूमिकामा धेरै कामहरू छन् । ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले पाठ्यपुस्तक पढ्दैनन् तर समाचार के आयो भनेर पत्रिका हेर्छन् । त्यस कारण भाषाको गतिशीलताको कुरा अर्को पाटो हो । भाषा परिवर्तनशील छ भन्दा पनि सबै कुराहरू परिवर्तनशील छन् ।
वेदका ऋचाहरू पनि ११ सय ३३ शाखाबाट अहिले जम्मा १२ शाखा मात्रै बाँकी छन् । तर, महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नुपर्‍यो भने, ती परिवर्तनशील हुन्छ भन्नेहरूले भाषा विज्ञान नै पढेका छैनन् । यो यथार्थ हो । भाषाको, शब्दको प्रयोग परिवर्तनशील हुन्छ, शब्दका अर्थ परिवर्तनशील हुन्छन्, वाक्य गठनको शैली परिवर्तनशील हुन्छ तर व्याकरण परिवर्तनशील हुँदैन । वर्णविन्यास एक पटक स्थापित भइसकेपछि मानक शब्दकोश भनेको पहिलो शब्दकोश नै हो ।
यो भाषा बचाउनेमा र यसलाई व्यापकीकरण गर्ने जस उहाँहरू (शरच्चन्द्र र कुवेर)ले दाबी गरेजस्तो संचार माध्यमकै हो भन्ने दाबी जस्तै भाषाशास्त्री, प्राध्यापकहरूको कतिको अंश छ ?
मलाई पनि संचार माध्यमबाटै नेपाली भाषा जोगिएको छ भन्ने लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा यो एकदमै सत्य हो । त्रिभुवन विश्वविद्याालयमा अहिले नेपाली पढ्ने विद्यार्थीहरू शून्य हुने अवस्थामा पुगिसके । त्यस कारण नेपाली भाषा कहाँबाट बचेको छ भन्दा संचार माध्यमबाटै हो । शिक्षकहरूले बोल्दैनन् अहिले, जम्मै नोट लेखाउँछन् । बोल्ने भनेका टेलिभिजन र रेडियोहरूले नै हो । त्यो कतिको सही बोलेका छन् भन्ने अर्को सवाल छ । उनीहरूलाई प्रशिक्षण नदिई नहुने अवस्था छ । तर, अहिले नेपाली भाषाको प्रचार, नेपाली भाषाको शिक्षण, नेपाली भाषाको सम्वद्र्धनका लागि, प्रसारणका लागि संचार माध्यम शिक्षणभन्दा माथि छ ।
अघि मैले भनेँ, यो नेपाली भाषाको ठेका लिन्छु भन्ने मान्छे जति छन्, तिनीहरू र एकेडेमी अनि विश्वविद्यालयका बाबजुत नेपाली भाषा यहाँसम्म आइपुगेको हो, उनीहरूको कारणले होइन । उनीहरूले छेक्दाछेक्दै, उल्टो बाटो खोज्दाखोज्दै यहाँसम्म आएको हो । किनभने उनीहरूले सिकाएको यथावत् प्रयोग गरेको भएदेखि संचार माध्यमको भाषा खत्तम हुन्थ्यो, यस्तो हुने थिएन् । त्यसभन्दा अगाडि आएको हुनाले यस्तो भएको हो ।
२०५८ सालको कुरा अलिकति भन्न चाहन्छु । प्रचलनमा नआएको शब्द हटाउने भनेको केके प्रचलनमा आइराखेको छ भन्ने कुरा कसले कति पढेको छ भन्ने एउटा कुरा । त्यसको नाउँमा शुद्ध र मूल रूप हिज्जे भएका शब्दहरू उहाँहरूले हटाउनुभयो । त्यो हटाउनका लागि कसैसँग छलफल, गोष्ठी, निर्णयकाहिँ कतै केही भएको छैन । एकदमै चुपचापसँगले, एउटा षड्यन्त्रमूलक हिसाबले हटाएको छ अर्थात् नेपाली भाषामा प्रयोग भइरहेका हाम्रा देवकोटादेखि लेखनाथसम्म भूपी, रिमालहरूले प्रयोग गरेका शब्दहरू त्यो शब्दकोशमा खोज्दा नभेटिने भए ।
त्यसरी शब्दकोशबाट शब्द नै षड्यन्त्रपूर्वक कसैलाई थाहा नदिएर विलोप पार्ने भनेको शुद्ध रूपमा भाषिक अपराध हो । त्यस्तो किसिमको काम गरेर एकेडेमी बसिरहेको छ । तर, त्यसवापत क्षमायाचनासम्म नगरीकन म नेपाली भाषाको उद्धार गर्छु भनेर कोही हिँड्छ भने त त्यो हाँस्यास्पद कुरा भयो ।
आमसंचारले सूचना दिने हो । त्यसका लागि त भाषा प्राविधिक कुरा हो नि ! भाषा साधन मात्रै हो, साध्य होइन । भाषा अथवा वर्णविन्यासको किन चिन्ता लिइरहनुपर्‍यो र नेपाली मिडियाले होइन र ?
हामीले जुन भाषालाई आफ्नो मानेर, जुन भाषामा हामी काम गरिरहेका छौँ, त्यो भाषाको चिन्ता लिनुहुन्न भनेर भन्न मिल्दैन, भन्न पनि सकिँदैन किनभने हामी त्यसैको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ ।
हामीले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने माध्यम जति बलियो भायो, त्यति हामी बलियो हुन्छौँ । जति माध्यम बलियो भयो, त्यति हामीले दिएका सूचनाहरू प्रभावकारी ढंगले हामीले दिन सक्ने भएको हुनाले त्यो माध्यम अर्थात् भाषा बलियो हुनुपर्‍यो । त्यही भएर सूचना सम्प्रेषण्को माध्यम बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो मान्यता हो ।
त्यो यदि बलियो भएन भने यस्ता विवादहरू भइरहेर, विभिन्न किसिमका यी व्याकरणका, वर्णविन्यासका कुराहरूमा अल्झिएर भाषा समृद्ध बनाउने र भाषालाई सुधार गर्ने अनि भाषालाई गतिशील बनाउने काममा अवरोध हुन्छ । त्यस कारण माध्यम बलियो, राम्रो, स्पष्ट हुनुपर्छ ।
भाषा भनेको प्राविधिक कुरा हो भने हामी किन त्यसमा अल्झिरहेका छौँ ?
सन्देश सम्प्रेषणीय भयो, राम्रोसँग बुझ्यो भने त कुरा पुगिगयो । सन्देश तपाईंसँग छ, सूचना छ, अझै सन्देश भन्दा पनि सूचना भन्छु म त । सूचना मात्रैले पनि त्यति धेरै सन्देश नदिन सक्छ । त्यसभित्र लुकेको कुराचाहिँ त्यसलाई कसरी र कस्तो भाषा प्रयोग गरेर दिनुहुन्छ, त्यसभित्र लुकेको सन्देशचाहिँ तपाईंले शब्दमा, वाक्यमा प्रयोग नगरीकन सही सम्प्रेषण हुँदैन । सूचना दिने हो तर कुनै पनि कुरा दिनका लागि त माध्यम हो नि त !
अनि माध्यम तपाईंको सशक्त भएन, खुट्टोमा टेकेर राम्रोसँग अडिएको छैन भने तपाईंको त्यो आधारभूत कुरा नै गडबड भयो । त्यसपछि त्यो शब्दको आसय नै फरक हुन थाल्छ । त्यस कारण हिज्जेको चिन्ता गर्नुपर्‍यो कि परेन भन्ने कुरो त प्रश्न नै होइन । किनभने जे छ शुद्ध छ, सही छ, परंपरागत रूपमा स्थापित छ, मान्यताप्राप्त भएर आएको छ । ऊ त्यसमा शिक्षित छ, दीक्षित छ भने उसले त्यो संचार प्रभावकारी ढंगमा गर्न सक्छ ।
अहिले जुन यो वर्णविन्यासको कुरा आएको छ, यो जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको हो र कृत्रिम किसिमको समस्या खडा गरिएको हो । यसो भने पनि हुन्छ, उसोे भने पनि हुन्छ भनेपछि ‘सही’ ह्रस्व लेख्ने कि दीर्घ लेख्ने भन्ने छ । वास्तविक कुरा के छ भने नेपाली भाषालाई क्षयीकरण गर्ने, एकदम यसको स्तर गिराउने किसिमको किन हो कुन्नि, अज्ञात कारणले एउटा योजनाबद्ध अभियान म देख्छु । के भने कसैले उच्चारण गर्न सकेनन् । परंपरागत रूपमा उच्चारण गरिएको छ, लेखिएको छ, आएको छ, सयौँ वर्षदेखि त्यसमा कसैको समस्या छैन । अचानक उहाँहरूले समस्या देख्नुभयो । कहाँनिर देख्नुभयो थाहा छैन । प्रयोग गर्नेलाई समस्या छैन ।
प्रयोग नगर्ने, यसो सरकारी जागिर खाएर बसेका मान्छेलाई समस्या लाग्यो किनभने केही न केही त भन्नुपर्‍यो उहाँहरूले । अनि उहाँहरू कता लाग्नुभयो भने, जसले उच्चारण गर्न सक्दैन, जो कमजोर छ, त्यसलाई खोज्दै हिँड्नुभयो । जो सबैभन्दा बिग्रिएको छ, त्यसैलाई यो मानक भन्दै घोषणा गर्दै हिँड्नुभयो ।
उक्त घोषणा उहाँहरूले छलफल गरेर, निर्णय मात्रै गरेको भए समस्या थिएन । मान्छे निर्णय गर्न सक्छ तर राज्यको शक्ति, स्रोत, साधन सबै लगाएर जबर्जस्ती लागू गर्न खोज्नुभयो । समस्या यसरी खडा भएको हो । यो सबै चौतर्फी रूपमा नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउने अनि स्तर गिराउँदै, यसको क्षयीकरण गर्दै यसलाई अर्कै विनासको बाटोतिर लैजाने किसिमको योजनाको आधारमा भएको हो । जानेर हो कि नजानेर हो, त्यो थाहा भएन तर जसरी गइरहेको छ, त्यसले त्यो दिशातिर धकेलिँदै छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
त्यस कारणले यो विवादमा त संचारकर्मीहरू पर्ने नै होइनन् । वर्णविन्यासदेखि लिएर शब्दको ठीक चयन, वाक्यको गठनसम्म ठीक तरिकाले हुनुपर्‍यो किनभने शब्दको खेलाडी त पत्रकारै हो । साहित्यकारले त कहिलेकाहीँ मात्रै लेख्ने हो । पत्रकारले दैनिक लेख्नुपर्छ र संसारमा भएका अनेक घटनाक्रमसँग जोडिएका वाक्य, भाषाहरूलाई उसले नेपाली भाषा दिनुपर्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र तत्काल उसले निर्णय गर्नुपर्छ । ती शब्दहरू त विश्वविद्यालयमा एक वर्षपछि पुग्लान्, छलफलका लागि । पत्रकारले तत्कालै गर्नुपर्छ, ऊ त्यस्तो ठाउँमा छ । त्यस कारण मिडियाले नेपाली भाषालाई धेरै चुनौतीपूर्ण किसिमले बचाइरहेको छ ।
संसारमा अरू पनि भाषा छन्, हामीले पनि जानेका छौँ । अंग्रेजी भाषाको कुनै एउटा शब्दको स्पेलिङ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर त्यत्रो दुनियाँका ठूलाठूला मान्छे छन्, कसैले भनेको सुन्नुभएको छ ? अथवा उनीहरू कसैको बुद्धि पुग्दै नपुगेको, नेपालीमा एकेडेमीमा जागिर खान पुगेका मान्छेहरूमा मात्र त्यो बुद्धि धेरै ठूलो भएर नै नेपाली भाषालाई बनाउन खोजेको हो कि ? हामीले त त्यसरी पनि बुझ्नुपर्ने भयो । त्यस कारण यो सबै कुरो केही व्यक्तिको एक किसिमको मति भ्रष्ट हुनुको परिणाम हो जस्तो मलाई लाग्छ ।